Indlu ecaleni kwepaki yesizwe :)
Nasiczne , Podkarpackie Voivodeship, Poland
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguSara
Ingcamango yokwakha indlu kule ndawo yomlingo yavela kuthando olukhulu losapho lwam ukuya kwiiNtaba zeBieszczady. Indlu yethu iya kukunika indawo yokuhlala epholileyo kunye nekhululekileyo kunye nethuba lokupheka ukutya ekhitshini elixhotyiswe ngaphandle nangaphandle kwindawo yokutshaya.
Sifuna ukwabelana nani ngekhaya lethu elakhelwe usapho lwethu, asiyohotele.
INasiczne yindawo egqibeleleyo yabantu abafuna ukubaleka kwihlabathi lanamhlanje. Yindawo yakho ukuba uyayithanda indalo kunye neendawo ezivulekileyo. Indlu ibekwe kufutshane nepaki yesizwe ukuze uve izilwanyana zasendle, kumgama kunjalo;)
Ngezantsi ungafumana iinkcukacha ezicacileyo malunga nendlu. Nceda uqhagamshelane nam ukuba ufuna ulwazi oluninzi.
Ndiza kuzama ukwenza ukuba ukuhlala kwakho kwindawo yethu kukhululeke kangangoko kunokwenzeka. Ukuba ufuna uncedo ngokulungiselela uhambo lwakho ndilapha ukukunceda, ukuba ufuna uxolo kwaye uya kuba nalo.
Indlu inkulu kodwa samkela zombini singles kunye namaqela amakhulu abahlobo okanye iintsapho.
Sinemigangatho emibini emikhulu ene:
- igumbi lokuhlala elikhulu elinendawo yomlilo,
- indawo yokutya,
-2 amagumbi okuhlambela,
- 3 amagumbi okulala amabini.
Umgangatho ophantsi yindawo evulekileyo enekhitshi elixhotyiswe (hob, microwave, plates etc.).
Kwigumbi lokuhlala kukho indawo yomlilo kunye nendawo eninzi yokuphumla. Iifestile ezinkulu kunye nembono emangalisayo yinto oya kuba nayo kwindawo yethu. Kukho i-terace enkulu elungele iitheko zasehlotyeni.
Sine-smokehouse yethu onokuthi upheke ngayo inyama emnandi.
4.86 ·Izimvo eziyi-95
4.86 · Izimvo eziyi-95
Iimbono ze-Bieszczdy yinto ongayi kuswela kuyo kwindawo yethu. Umsinga waseKnyaz’k oqukuqela kufutshane nawe uya kukushukumisa ukuba ulale emva kosuku oluxakekileyo. Ungalibali ukuthatha uhambo ukuya eNasiczansky Creak-ungaqubha apho xa imozulu intle. Kukho iingoma ezininzi kwiinduli ezijikelezileyo, iindawo zokutyela ezinkulu, iindwendwe kunye nayo yonke into ikufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Sara
Siya kuhlala sinxibelelana ngefowuni ngalo lonke ixesha. Izitshixo ziya kufumaneka ukuba uziqokelele xa ufika. Qaphela ukuba akukho fowuni yokwamkelwa kwidolophana yethu. Kuya kufuneka uhambe i-5min ukwenza umnxeba. Iifowuni zikaxakeka ziyafumaneka!
Siya kuhlala sinxibelelana ngefowuni ngalo lonke ixesha. Izitshixo ziya kufumaneka ukuba uziqokelele xa ufika. Qaphela ukuba akukho fowuni yokwamkelwa kwidolophana yethu. Kuya kufu…
Iilwimi: English, Polski, Русский